नेपाली भूमिमा असोजदेखि भारतीय रेल – YesKathmandu.com
नेपाली भूमिमा असोजदेखि भारतीय रेल
आइतबार २७, फागुन २०७४
काठमाडौं । नेपाली भूमिमा आगामी असोजदेखि पुनः रेल कुद्ने भएको छ। चार वर्ष अघिसम्म सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल बन्द भए पनि भारत सरकारले नै पुनः नेपाली भूमिमा रेल कुदाउने भएको छ। न्यारोगेजमा सञ्चालन हुने पुरानो रेलमार्गको ५२ किमिलाई सुधार गरेर अहिले तत्काललाई ३५ किमिमा ब्रोडगेजको रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यसलाई ७० किमिको दूरीमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास खण्डको जयनगर–जनकपुर–बिजलापुरसम्मको ५२ किमिखण्डको पुरानो रेल लिकलाई सुधार गर्ने काम हाल ८० प्रतिशत सकिएको छ। यस खण्डमा आगामी असोजसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सकिने र भारतले नै रेल कुदाउने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भारतले बर्दिवासदेखि विजलापुरसम्मको जम्मा ७० किमि दूरीमा रेलमार्ग बनाउँदै छ। यसमध्ये २०७५ को असोजसम्ममा ३५ किमि पूर्ण रूपमा तयार हुनेछ। बाँकी ३५ किमिका लागि भने नेपाली भूमितर्फ जग्गा अधिग्रहणकै काम बाँकी छ। यो खण्ड तयार हुन समय लाग्ने भएकाले असोजसम्ममा रेल दौडाउन मिल्ने गरी तयार हुने ३५ किमि रेलमार्ग रेल कुदाँउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ।
भारतले निर्माण गरिरहेको ७० किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमि भारतीय भूमिमा र ६७ किमि नेपाली भूमिमा पर्छ। ‘हामीसँग रेल नभएको र तत्काल रेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने कुनै तयारी नभएकालें भारतीय पक्षबाटै सञ्चालनको निम्ति अनुरोध गर्ने भएका छौं’, उपाध्यायले भने।
नेपालले भाडामा लिने वा भारतीय रेललाई नै नेपालसम्म कुँदाउने भन्ने विषयमा नयाँ मन्त्री आएपछि औपचारिक निर्णय हुने जानकारी पनि उनले दिए। तयारी मार्गमा रेल भने पक्कै दौडने दाबी उपाध्यायको छ। नेपाल सरकारले चालू आव २०७४÷०७५ मा रेलमार्ग बनाउन विनियोजन गरेको चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा यस रकमको पहिलो प्राथमिकता पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको पूर्वी खण्डको ३० किलोमिटर रेलमार्गमा परेको छ।
यस रकममध्ये विभागले हाल एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ। यस्तो रकमबाट भारतले निर्माण गरिरहकेको सिमानासँग जोड्ने गरी महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना सकियो, अफगानिस्तानसँग ६ बिकेटले पराजित
गृहमन्त्रीज्यू ! बोक्सी आरोपमा कुटिएकी राधाभन्दा अभियुक्त मान्यज्यूको ज्यान प्यारो !
ऐन टेकेर ९० करोड फुत्काउने हठ
पेप्सी कम्पनीद्धारा मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर खेलवाड, डीउ बोटलमा भेटिए ज्यानमारा बिषादी
यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट प्रथा खारेज गर्न मन्त्रीकै माग
अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगस्वरूप दिने ५० करोड डलरमा बिहीबार हस्ताक्षर हुँदै
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेमाथि विष्णुप्रजापतिको गभ्भीर आरोप
बिद्यार्थीको भविश्य र अभिभावकको लक्ष्यमा नो कम्प्रमाइज
त्रिपाल घोटलामा सरकारको मिलेमतो
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग अख्तियारले बयान लियो
चुडामणि शर्मा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व पनि तानिदै, ५१ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुमान
राजधानी नतोकिए नागरिकता फिर्ता गर्ने चेतावनी सहिद , डोटी पुन बन्द आह्वान
मृतक पाइलको शव काठमाडौं ल्याइयो, शव देखेर परिवाजन भावविह्ल
‘संविधानमाथि चित्त नबुझ्दैमा जंगल पस्नुपर्ने अवस्था छैंन’
सेनाको ब्यारेक नराख्न माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित
यातायात व्यवसायीद्धारा सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा (यस्ता छन कार्यक्रम)
एमाले संसदीय दलको बैठकमा गएनन् बामदेव गौतम
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बालानन्द पौडेल किन ?
प्रधानमन्त्रीलाई ‘कु’गर्न भारतीय विदेशमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले टेलिफोन गरेपछि……..
८० स्थानमा जित्दै एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन पहिलो